By Htet Wai Aung - September 16, 2016
ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အပေါက်မှာ ကွန်ပြူတာက usb keyboard အစစ်ကို တပ်သုံးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် bluetooth keyboard တတ်သုံးတဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ် Xiaomi TV လိုမျိုး Android စနစ်သုံး TV တွေ ရဲ့ usb မှာ keyboard တတ်သုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် ကီးဘုတ်အစစ်ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သုံးနေကျ soft keyboard တွေဖြစ်တဲ့ frozen, bagan, m3, ဗေ, anysoft တို့က disable ဖြစ်သွားပြီး keyboard အစစ်နဲ့ စာရိုက်လို့ ရသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် english စာ တစ်ခုတည်း ရပါလိမ့်မယ်။ ကျတော်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဒီ nz physical keyboard layout ကို install လုပ်လိုက်ရင်တော့ မြန်မာလက်ကွက် layout တွေ ရလာပြီး ကီးဘုတ်အစစ်နဲ့ မြန်မာစာတွေ ရိုက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ input setting ထဲမှာ ကိုယ်ရိုက်မယ့် language ကို enable လုပ်ထားပြီး english စာနဲ့ တလှည့်စီ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ (screen မှာ လက်နဲ့တို့ပြီး စာရိုက်လို့မရတဲ့ Android tv တွေမှာ ကီးဘုတ်အစစ်နဲ့ တပ်ပြီး မြန်မာစာ ရိုက်လို့ရပါပြီ)
မြန်မာစာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကီးဘုတ် switch shortcut က ဖုန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူနိုင်ပါ။ ကျတော့် Redmi Note (Xiaomi) မှာတော့ ctrl+space နဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ပြောင်းရိုက်လို့ရပါတယ်။ OTG မရတဲ့ ဖုန်းတွေ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဗမာလက်ကွက် ၂ ခုအပြင် တိုင်းရင်းသား လက်ကွက်တချို့ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Description လေး ဖတ်ပြီးမှ install လုပ်ကြပါ။ ကျတော့် app လေးကို play store ပေါ် တင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုဆန်းလင်းနိုင် ကို ကျေးဇူးပါဗျာ။
NZ Physical Keyboard Layouts will add Extra hardware / Physical Keyboard Layouts (Myanmar Languages) to your android when using Bluetooth or USB (with OTG cable)
FREE - No Lite / Trial version
THIS doesn't modify any virtual keyboard, Only add more options of layout for external keyboard.
Layouts at this moment:
Myanmar (Unicode) with Pa-Oh
Myanmar (Karen-Unicode) with Kayah
Myanmar Unicode layout, Shan Layout, Mon Layout, Karen Layout must use with Myanmar Unicode Standard fonts. (eg: Padauk, Pyi Htaung Su) Myanmar (Zawgyi) layout is only for Zawgyi font users.
Android App Keyboard ဆောင်းပါး
Unknown September 23, 2018 at 2:41 PM
အဆင္မေျပဘူးခမ် ဘာလုိ႔လဲ vivo 53 ပါ
Unknown January 13, 2019 at 3:51 PM
ေျပာင္း ကို႐ိုက္လိုက္တိုင္း ေျပါင္း ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္။ေျဖရွင္းနည္းရိွလား။Office Suite software word မွာ အဲျပသနာက်န္ခဲ့တယ္။
Unknown November 27, 2019 at 5:16 PM
Thant Zin Win January 1, 2020 at 12:37 AM
Unicodeမှာ ဂ ငယ်ရိုက်မရလို့